Muuri News Network » XOG: R/wasaare Kheyre oo Beri Dalka ka Ambabaxaya, kana soo Horjeestay Amarkii Farmaajo
XOG: R/wasaare Kheyre oo Beri Dalka ka Ambabaxaya, kana soo Horjeestay Amarkii Farmaajo
Feb 24, 2018 - Comments off
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maalinta berri oo Axad ah lagu wadaa inuu u ambabaxo dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, kaddib casumaad rasmi ah oo uu ka helay Mas’uuliyiinta Imaaraadka Carabta.
Booqashada Ra’iisul Wasaare Kheyre ee Imaaraadka Carabta ayaa soo baxday, kaddib ka qeyb galkiisa shirkii Davos ee Switzerland bishii hore oo ay isku arkeen Wasiirka Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta.
Safarka Kheyre ee Imaaraadka Carabta ayaa labo jeer dib uga dhacay arrimo farsamo iyo culeysyo kale oo ka yimid Madaxweynaha Soomaaliya oo amray inuusan safar ku tagin dalka Imaaraadka.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa la filayaa in magaalada Abu Dhabi kula kulmo Mas’uuliyiinta Imaaraadka Carabta, iyagoo ka wada hadli doona xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa sanadkii hore booqasho ku tagay dalka Qatar, xilli ay jirtay xiisada siyaasadeed ee u dhaxeysa dalalka Khaliijka.
Imaaraadka Carabta ayaa ku lug yeeshay xaalado siyaasadeed oo ka jiray Soomaaliya iyo go’aanadii Maamul goboleedyada ay uga soo horjeesteen mowqifkii dhex dhexaadnimada ee dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafka Khaliijka.
Xiriirka Villa Somalia iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxooga mugdi galayay, tan iyo wixii ka dambeeyay markii siyaasiyiin ku xiran Imaaraadka ay mucaarado xooggan ku fureen dowladda Soomaaliya iyo mowqifkii dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafka Khaliijka.